Leonardo Bonucci yuu u aqoonsanyahay in uu yahay daafaca Caalaamka ugu fiican Xiligaan? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Leonardo Bonucci yuu u aqoonsanyahay in uu yahay daafaca Caalaamka ugu fiican Xiligaan?
(30-8-2017) Difaacyahanka birta ah ee kooxda AC Milan iyo Xulka qaranka Talyaaniga ee Leonardo Bonucci ayaa sheegay in Sergio Ramos oo ay Sabtida iska hor imanayaan labadooda waddan, uu yahay ciyaartoyga difaaca ah ee ugu wanaagsan dunida.
“Waa difaaca ugu wanaagsan dunida, waxaanu ku guuleystay Champions League. Jallaafada uu u dhigo weeraryahannada ayaa ay kooxdiisu ugu mahadcelisaa, laakiin khibrad ayaa jirta taas ka caawisa.” sidaas ayuu yidhi Bonucci.
Xulka qaranka Spain ayaa Sabtida ku martigelin doona Talyaaniga garoonka Santiago Bernabeu, ciyaar ka tirsan isreeb-reebka Koobka adduunka oo labada waddanba ay u dagaallami doonaan midka kaalinta koowaad noqonaya, laakiin Bonucci waxa uu aaminsan yahay in qaranka Talyaanigu uu aad u wanaagsan yahay, dhibaato badanna uu gaadhsiin karo Spain.
“Waxaanu haysanaa koox dhibaato ku noqon karta Spain, wax walbana sida ugu wanaagsan ayaanu u samayn doonaa si aanu u guuleysano, xattaa annagoo og in aanay sahlanaan doonin.” Sidaas ayuu yidhi Bonucci.
Talyaanigu waxay haystaan kalsooni, sababtoo ah waxa ku jira ciyaartooyo badan oo dalkooda ka ciyaara, kuwaas oo u badan da’yar tayo badan leh, sida uu aaminnsan yahay Bonucci.
Difaacan ka dhaqaajiyey Juventus bishii July, waxa uu tibaaxay inuu rajaynayo in uu muddo dheer sii xidhnaado funaanadda dalkiisa oo uu difaaco, waxaana uu ammaanay Rugani, Caldara iyo Romagnoli oo uu xusay inay khibrad badan ku kasbadeen Romana Cagliari.
Khadka dhexe ayuu sheegay inay uga ciyaarayaan Pellegrini iyo Verrati, halka weerarkana ay u istaagi doonaan Isigne iyo Belotti, guud ahaanna kooxdoodu tahay mid isku kalsoon oo khibrad leh.
Khilaaf ayuu kaga tegay Juventus, hase yeeshee, ma jirto dhibaato u dhexaysa laacibiintii ay funaanadda liidka cad leh u wada xidhan jireen Cajuusadda Talyaaniga, waxaana uu xusay inay saaxiibo yihiin Chiellini, Barzagli iyo Buffon oo aanay dhibaato u dhexaynin.